ပျိုမဒီလေးတို့ရေ 💁💁 – unique.com.mm
Stay Home မှာဘာတွေလုပ်နေကြလဲ ??
အိမ်မှာနေပြီး အစွမ်းကုန် Glow ကြည့်ပါနော်….👌
ဆိုင်သွားပြီး Skin Care လုပ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေတော့ မျက်နှာအသားရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားရခက်နေလား 😦
ချောမွေ့ပြီး ဝင်းဝါတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ ပျိုမဒီလေးတွေအတွက် အရေပြားအတွင်းအထိတိုင်အောင် ကြည်လင်တောက်ပမှု ကိုပေးစွမ်းနိုင်မယ့် Panasonic အမှတ်တံဆိပ် မျက်နှာထိန်းသိမ်းတဲ့ စက်လေးတွေနဲ့ ပျိုမဒီလေးတို့ရဲ့ အသားအရေကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ဖို့ အကြံပေးလိုက်တယ်နော် … 😍
ဆိုင်သွားစရာမလိုပဲ Panasonic အမှတ်တံဆိပ် လေးကိုသုံးပြီး Facial Treatment လုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ် ပျိုမဒီလေးတွေအတွက်..
💙 ပထမဆုံး Panasonic EH-AS31 စက်လေးရဲ့ Water Tank ထဲကို သန့်စင်တဲ့ရေထည့်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ရေနွေးငွေ့ နွေးနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာကို ပေါင်းတင်မယ် …
💙 ပေါင်းတင်ရင်းနဲ့ EH-ST 63 Ionic Cleansing and Toning Device ‌ ‌လေးကို Cleansing Mode on ပြီး အသားအရေနဲ့ အဆင်ပြေစေမယ့် Temperature ချိန်ပြီး တနေ့တာလိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်တွေကို ဖျက်လိုက်မယ်နော် …
💙 ပြီးရင် EH-SC65 နဲ့ မျက်နှာကို အတွင်းပိုင်းထိ သန့်စင်ဆေးကြောမယ် …. မျက်နှာသန့်စင်ပြီးရင် EH-ST 63 ရဲ့ Vitamin C ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ brighten mode ကို on ပြီး Facial Treatment လုပ်မယ် …
💙 Facial Treatment လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ EH-ST63 နဲ့ပဲ Moisturizing mode ကို on ပြီး Moisturizer လေးလိမ်းလိုက်ပြီးရင် တင်းရင်းနုပျိုပြီး ချောမွေ့ဝင်းဝါတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပေါ့ …
အခုပြောပေးခဲ့တာ တစ်နေ့တာလုပ်လို့ရတဲ့ Skin Care Facial Treatment လေးပေါ့ … 💞
ဘာတွေးနေတာလဲ ထဲဝင်ပြီး အစွမ်းကုန် Glow ရအောင်မှာလိုက်တော့လေ …
ဝယ်ယူရန် Link --- > https://bit.ly/3eWHvZo